,, Cagjar Vs Shidde ,, | Hangool News
,, Cagjar Vs Shidde ,,
January 27, 2019 - Written by Hangool News 1
Marka xaqiiqada laga hadlo , nuxurka u dhaxeeya laba nin ee isku haya talada dawlad deegaanka soomaali galbeed waa hal qodob , kaas oo ah , dhismaha xisbiga talada deegaanka haya , kaasoo Cagjar ku doodayo in lagu saleeyo dagmooyin , halka Shide ku doodayo in lagu saleeyo Qabiilooyin , xaqiiqduba waa intaas kooban .
Degmooyinka uu ku dhagan yahay Mustafe Cagjar waa kuwii uu magacaabay Cabdi maxamuud Cumar ( Ina iley ) iyo kuwii ay magacabeen Madaxwaynayaashii ka horeeyay oo dhamaantood kasoo jeeday hal qoys , kuwaasoo ku kacay sad bursiimo aan caqli ahayn .
Tusaale , Gobolka Jarar .
Degmooyinka Awaare iyo Gaashaamo waxay ka tirsan yihiin gobolka jarar , Degmada Awaare waxaa wada Degen Isaaq iyo Ogaadeen , halka Degmada Gaashaamo Isaaq Degen yahay .
Degmada Awaare iyo Gaashaamo isku mar ayay noqdeen degmooyin , waxaana deegaan balaadhan gaashaamo , hadana sidan baa wax loogu qaybiyay .
Awaare ,dhinacii Ogaadeen waxaa la siiyey degmooyin ,
– Yoocaale ,
– Dhagax Madow ,
– Dig ,
– iyo Gunagado
– Bilcin buur .
Halka qaybtii Isaaq laga dhigay keliya Degmada Daroor .
Degmadii Gaashaamo ee la midka ahayd Degmada Awaare waa sidii uu kaga tegay Xayle Salaase , wax na iskama badalin .
Guud ahaan sawirka Gobolada iyo Degmooyinka Dawlad deegaanka Soomaaliduna waa sidaas , Beesha Madaxwayne Mustafe oo xukunka mudo dheer gacanta ku haysay ayaana ku shubatay .
Doodaas mid la mid ah waxaa soo maray Wadanka Soomaaliya oo Beesha Madaxwayne Mustafe ku doodi jirtay in Degmooyin iyo Gobolo wax lagu qaybsado , kuwaasoo ah kuwii uu ka tagay M S Barre , iyadoo 21 sanadood ee taliskiisu jirey uu sida dawlad deegaanka Soomaalida wax uGu qaybiyey , tusaale kooban hadaynu soo qaadanana .
Gobolkii la odhan jirey Jubada hoose wuxuu u qaybiyey 3 Gobol , gobolkii Majeerteeniya laba gobol , halka Gobolkii Hiiraan uu yahay sidii Talyaanigu kaga tagay 1960 .
Si kastaba ha ahaatee , Muranka u dhaxeeya labada nin waxaa Xaqa iyo Cadaalada ku taagan Axmed Shidde , kaasoo doonaya in Soomaalidu si Cadaalad iyo walaalnimo ah wax ku qaybsato , halka Madaxwayne Mustafe difaacayo sedbursiimo xaafadiisu haysato , taasoo dhaawacaysa walaalnimada iyo wada jirka Umada Soomaaliyeed ee ku wada nool deegaankaas .